IiSilos-Igumbi leKumkanikazi yeStudio (iGumbi 2) - I-Airbnb
IiSilos-Igumbi leKumkanikazi yeStudio (iGumbi 2)
IiSilos zikwindawo endala yeHyden Abattoir. Ngokufanelekileyo ibizwa ngokuba yiSilos njengoko le ndawo inemibono emangalisayo yeesilo zeHyden Cooperative Bulk Handling (CBH). ISilos yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala kubo bonke abahambi! ISilos inamagumbi ali-15 een-suite kunye nokufikelela kwikhitshi elidityanelweyo, indawo yokuhlamba impahla kunye nendawo yokutyela.
ISilos inamagumbi amane okulala een-suite iindonga kunye nokufikelela kwikhitshi elidityanelweyo, indawo yokuhlamba impahla kunye nendawo yokutyela. Igumbi ngalinye linendlu yokumkanikazi, ibhedi engatshatanga okanye ibhedi, iwadilophu, idesika, isitulo, ifriji yebha, iketile kunye nethosta. I-en-suite ibandakanya amampunge, indlu yangasese kunye neshawari.
Zonke iilinen, iitawuli, ukucocwa kunye ne-WIFI zibandakanyiwe kwintlawulo.